Volcano of Vengeance: Since 1000s' of Years - कथा | Kavyalaya - काव्यालय
Volcano of Vengeance: Since 1000s’ of Years
by प्रवीण May 26, 2019
के तपाईँ अन्धविश्वासमा विश्वास गर्नु हुन्छ ? म चै अन्धविश्वासमा विश्वास गर्नेहरुलाई विश्वास गर्छु ! अन्धविश्वासको दुनियाँ भयङ्कर भएता पनि कस्तो मनोरञ्जनमय छ ? तपाईँलाई थाहा छ, केही कुरा जसलाई मानौ कि नमानौ ? – यो कति रहस्यमय होला ? छ नै ! छैन र ? अझ, यो भन्दा रहस्यमय त अन्धविश्वासलाई विश्वास गर्नेहरु छन् । क्या कन्फिडेन्टका साथ भनिदिन्छन् कि यो सत्य हो । अनि कति सजिलै मानिदिन्छन्, ती सजिलो गरि नमानिने कुराहरु पनि । यो कुरा मलाई गजब लाग्छ । इन्जोय गर्छु । खुब ध्यान दिएर सुन्छु यस्ता कुरा । सानामा बुबाले लोककथा/दन्त्यकथा सुनाएको खुब याद आउछ ? यी अन्धविश्वासहरु पनि लोककथा नै हुन्- जिन्दगिका !
( लुम्बिनी तन्दुरी भोजानालय )
केही दिन देखि म मेरो कथाको लागि एउटा पात्र खोजिरहेको थिए । १/२ हप्ताअघि, भेटाएको छु। भेटिएको छ । अहिले आइपुग्छ ऊ …करिब ५-६ बजे भित्रमा आउछ । यही होटेल/पसलमा । र सटरअघि कागती-खोर्सानीको एक झुण्ड झुन्डाएर जान्छ । मेरो कथाको पात्र यही/त्यही हो । म आफ्नो कथाको पात्रसँग बोलेको छैन आजसम्म । ऊ सिर्फ हप्तामा दुइपटक आउछ – मंगलबार र शनिबार । कतिचोटि बोल्छु भन्छु , सक्दिन । कसरी सुरु गर्ने बाचचीत/बोलचाल यो कहिले मैले जानिन । तर आज म जसरी भए नि बोलाउछु र त्यसको/उसको बारेमा सोध्छु भनेर बसेको छु । नभन्दै ऊ आयो ।
( मंगलबार )
” दाइ यता आउनु न ?” , म उसलाई बोलाउछु ।
– ” किन र भाइ ?” , एक प्रश्न वाचक नजर फ्याक्छ ऊ मतिर ।
” यता बस्नु न… मलाई यसको बारेमा केही जान्नु छ , तपाईं बताउन सक्नु हुन्छ !”
एउटा रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराउछ ऊ । मलाई तल देखि माथिसम्म हेर्छ । अनि भन्छ –
” यसको बारेमा ? तिमी जस्तो पढेलेखेको मान्छे/अहिलेको २१औं शताब्दीको मान्छेले यो कुरामा विश्वास गर्दैनौं क्यार … मैले केही भने पनि ..!”
“होइन दाइ, मलाई यसको बारेमा केही जान्नु छ/लेख्नु छ , त्यसैले …”
ऊ फेरि फिस्स हाँस्छ ।
” त्यसोभए तिमी लेखक हौं ?”
-” होइन, त्यसै लेख्न मन लाग्छ/रुचाउँछु !”
” त्यो के भो त ? लेखक होइन र ?”
– ” मेरो कुनै किताब छापिएका छैन , फगत एक फेसबुके लेखक हुँ !”
ऊ केही बोल्दैन सिर्फ मलाई एकटकले हेरिबस्छ !
” के तपाईं सधै बेलुका मात्र यो सब राख्न हिड्नु हुन्छ ?”
– ” होइन बिहानैदेखि झुन्डाउदै हिड्छु उता…ठमेल..सोह्रखुट्टे…नयाँबजार ..अनि यहाँ बालाजु …!”
” मंगलबार र शनिबार नै किन ?”
– ” यो परम्परा/रित हो ! भन्छन् : यी दुई बारमा दानवहरु धेरै शक्तिशाली हुन्छन् । ”
” यो झुन्डाउदा तपाई मन्त्र पनि जप्नु हुन्छ होइन ?”
– ” हो , तर त्यो भन्न मिल्दैन ?”
उसले मेरो आँखामा छछल्किएको प्रश्न बुझेछ ।
” अनि यो किन हरेक पसल नै पिछे झुन्डाउछन् ?”
– ” यसको बारेमा त तिमीलाई थाहा नै होला ?”
” यत्ति थाहा छ/सुनेको हुँ – यसले गर्दा पसलमा नजर लाग्दैन , फलिफाप हुन्छ , नराम्रो हुदैन !”
( यसको साइन्टिफिक कारण पनि थाहा छ मलाई । तर म साइन्सको उति ठूलो फ्यान हैन । मलाई हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न अल्झिन खुब मन लाग्छ । त्यसैले केही भनिन ! )
– ” अनि तिमीलाई थाहा रै’छ त …!”
” मलाई अझ बढी जान्नु छ – यसको कारण/कहानी/किंवदन्ती , सबै ?”
– ” कहानी ? हँ ? ( गला साफ गरेको आवाज… ऽऽऽ..), सुन उसोभए –
‘ धेरै पहिले देउताहरुको पालामा, जब भगवान र दैत्य बीच लडाइँ भयो त्यसमा दैत्य/दानवहरु पराजित भए । यो कुरा पहिले नै जोतिष असुराले भविष्यवाणी गरेर दानव राजा भुल्वाक्षणलाई अवगत गराइसकेका थिए । राजा भुल्वाक्षणलाई यो कुरा थाहा थियो कि जोतिष असुराको भविष्यवाणी कहिल्यै पनि गलत हुन सक्दैन । तर यो कुरा उनले आफ्ना लागि मर्न/मार्न तयार हुने दानव सेनाहरुलाई भन्न सक्दैन थिए । यसले उनीहरूको मनमा पराजयको भय पहिला नै पैदा गर्थ्यो । त्यसैले उनले देउताहरुसँग बदला लिनलाई कालो जादुले आफ्नी कान्छी छोरी ‘मक्ष’ लाई बोक्सी बनाएर पहिला नै धर्तीमा पठाए । त्यतिबेला धर्ती पनि स्वर्गको एउटा राज्य थियो । मक्षको सात वटा टाउको थियो र जसले ऊसँग आँखा जुधायो ऊ बिरामी परिहाल्थ्यो र मर्थ्यो ।
मक्ष धर्तीमा गई, भिक्षुणीको रुप लिइ हेरक घरघरमा भिक्षा माग्दै हिड्न थाली । र जो जो मान्छेसँग उसका आँखा जुथ्थे उनीहरू पहिला बिरामी हुन्थे , छट्पटिन्थे अनि मर्थे । उता देउताहरुले राजा भल्वाक्षणलाई स्राप दिई सधै सधैका लागि नर्कमा एउटा ढुङ्गाको रुपमा बन्दी बनाइदिए र स्वर्गतिर लागे । यो खवर सुनेपछि मक्षको रिसको प्रदर्शनी धर्तीमा झन् तिव्र भयो । अब मान्छे मात्र होइन जनावरहरु पनि बिरामी हुन थाले, रुख/बिरुवाहरु मर्न थाले , फलफुल/तरकारी ओइलिन थाले । यो सब देखेर धर्तीका राजा मानवरलाई, आफ्नो राज्यमा कस्तो संकट आइ पर्यो भन्ने तनाब सिर्जना भयो । र यसको हल खोज्न उनी कञ्चनजंघाको फेदिमा मानव रुपमा तपस्या गरेर बसिरहेका विष्णु भगवानकोमा पुगे । उनले मानवरको सबै कुरा सुनेपछि , मायबी रुप लिइ सिधै उनी मक्ष भए ठाउँमा पुगे । उनलाई मोहनी लगाइ आफ्नो प्रेममा फसाए र गर्भवती बनाए । अनि मक्षको पेटमा भएको बच्चा कहिले पनि नजन्मियोस् भनि स्राप दिए । अब सधैं ऊ यसरी नै रहिरहने भई ।
आफूलाई धोका दिएकोमा मक्ष रिसले झनै चुर भई र ऊ धर्तीका कुनै पनि मान्छे र तिनीहरूले गर्ने काम सफल हुन नदिने भनि प्रण लिई । यता विष्णु भगवान मानवरको दरबार आइ सबै कुराको बेलिबिस्तार लगाए । यो कुरा सुनेपछि मानवर झनै आत्तिएर भने –
” मैले त तपाईसँग समस्याको हल मागेको थिए तपाईले त झन् समस्या थपिदिनु भयो !”
“यसको हल नै यही हो, योभन्दा अरु विकल्प थिएन , यो ब्रम्हान्डमा हरेक कुराको आ-आफ्नै कारण अनि हल हुन्छ यो तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो “भन्दै विष्णुले मानवरलाई सम्झाए । अनि भने – ” अब देखि हरेक घरमा ७ वटा खोर्सानी र एउटा कागती मुल ढोका अघि झुन्डाएर राख्नु , यसले मक्षको ध्यान भङ्ग हुन्छ, यसमै हराउँछे ऊ – ऊ भित्र मैले एउटा प्यास छाडिदिएको छु । जब उसले कागती र खोर्सानी देख्छे , उसले सब कुरा भुल्छे किनकि ऊभित्रको पटेको बच्चा मेरै रुप हो र त्यो देख्ने साथै उसले सधैं मक्षलाई भोक दिन्छ र भड्काउने काम गरिरहन्छ ! ”
– ” त्यसदिन देखि मक्ष हरेक मान्छेको घर र पसलमा उसैगरि धाउँछे तर जब कुनै पसलमा वा घरमा यो कागती र खोर्सानी झुन्डिएको देख्छे तब उसको पेटमा भएको बच्चा भोकले छट्पटीन थाल्छ । यसले मक्षलाई पीडा दिन्छ र ऊ त्यहाँबाट अन्तै भाग्छे…रे …! ”
म उसलाई एकटकले हेरिरहेको छु । उसको कहानी मेरो दिमाग फिल्म जसरी देखियो । एकपछि अर्को दृश्य – प्रष्ट । उसले टेबलमा भएको पानीको बोत्तल तान्दै पानी पियो । म उतिर हेर्दै प्रश्नवाचक शैलीमा मुस्कुराएँ ।
– ” यहीँ हो तिमीले खोजेको कहानी/किंवदन्ती – अझै अरु जान्न मन छ ?”
मैले ‘मन छ’ को टाउको हल्लाए । उसले आफ्नो झोलाबाट एउटा सानो पुस्तक निकाल्यो र मलाई दियो । धेरै पुरानो किताब , कागजहरु सबै खुम्चिएका तर अक्षर भने स्पष्ट । मैले शिर्षक पढे – “मक्षकथा” ।
– ” यो किताब अस्तित्वमा छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । म चाहन्छु – कसैलाई थाहा नहोस् पनि ! तिमी यस बारेमा केही जिज्ञाशु देखियौ र यो पढ्न दिदैछु आउने शनिबार मलाई फिर्ता गर है …?”
मैले हुन्छ भने । उसले आफ्नो झोला काँधमा भिर्यो र मसँग बिदा माग्दै अरु पसल तिर गयो । म पनि चियाको पैसा तिरि सिधै आफ्नो कोठातिर लागे ।
कोठामा आएर त्यो करिब ३२ पेजको सानो ‘मक्षकथा’ पढ्न थाले । सबै कुराहरु त्यही मान्छेले भने जस्तै थियो तर अन्तिमको एक पेजले म आश्चर्यमा परे :
” करिब हजार वर्षसम्म यही क्रम चलिरह्यो । जब जब मक्ष आफ्नो बदला लिन भनि कुनै मान्छेको घर या कार्यथलोमा पस्न खोज्थी , त्यहाँ झुन्डिएका खोर्सानी र कागतीको बास्नाले उसको पेटमा भएको बच्चाको भोकलाई भड्काउथ्यो – र ऊ छट्पटिन थाल्थ्यो । यसले मक्षलाई असैय पीडा हुन्थ्यो र ऊ त्यहाबाट भागिहाल्थी ।
तर मक्षको दिमागमा बदलाको ज्वाला भने सल्किरहेको थियो। उम्लिरहेको थियो । उसको जिन्दगीको लक्ष नै यही एउटा थियो । बिस्तारै ऊ पसलमा झुन्डिएका कागती र खोर्सानी चोर्न थाली । र आफै बोक्न थाली । उसको पेटमा छट्पटी मच्चिन थाल्थ्यो तर उसले सही । सहिरही । उसले अब यो छटपटाहटलाई आफ्नो आदत बनाउन थाली । र उसलाई थाहा थियो अर्को हजार वर्षसम्ममा यो पेटमा भएको बच्चा छट्पटिएरै अवश्य मर्ने छ …..”
अर्को आश्चर्य के लाग्यो भने – यो किताबको हरेक ‘मक्ष’ शब्दमा कसैले रातो पेनले गोलो घेरा लगाइदिएको छ । यसको पछि के कारण होला ? अनि कसले/किन लगाएको ? त्यही मान्छेले जसले मलाई यो किताब दियो ?
त्यो किताबलाई टेबलमा थन्काए । किचनमा गएर दुई गिलास पानी पिए । अनि कोठा आए, ल्यापटप खोले र एउटा कथा लेख्न सुरु गरे –
” तपाईं अन्धविश्वासमा विश्वास गर्नु हुन्छ ?……
त्यो मान्छेले भनेका हरेक कुरा/ मैले सोचेका कुरा सबै कथामा उत्रिदै आए । तर अब यसको क्लाइमेक्स के त ? मलाई कथाको अन्त्य चाहियो । कहाँ खोजौ ? टाउको दुखाउन थाले ? के लेखौ ? के हुनसक्छ यसको अन्त्य ? ‘ त्यही मान्छेलाई सोध्छु ‘ । होइन होइन म उसलाई पछ्याउछु, कति घर/पसल डुल्छ ऊ , उसको कामको अन्त्य कसरी हुन्छ ? त्यही अन्त्य मेरो कथाको अन्त्य हुनसक्छ । हो, म उसलाई पछ्याउछु ।
( शनिबार )
५:५० भयो । ऊ आयो । चारैतिर आँखा डुलायो । ‘सायद मलाई खोजेको हुनुपर्छ !’ म भित्र पट्टीको क्याबिनमा थिए । उसले मलाई देखेन र सरासर कागती-खोर्सानी झुन्डायो , पैसा लियो र आफ्नो बाटो लाग्यो । म उसले नदेख्ने गरि उसलाई पछ्याउन थाले । उसले दिएको पुस्तक हातमै थियो मेरो ।देखि हालेको खण्डमा म यही पुस्तक फिर्ता गर्न आको भनिदिन्थे । ऊ हरेक पसल पसलमा कागती-खोर्सानी झुन्डाउदै हिड्यो । बालाजु एरियाको सबै पसल भ्यायो उसले । घाम डुबिसकेको थियो । घडि हेरे – ६:३६ भएको रहेछ । सिर्फ एउटालाई छाडि, उसको हातमा भएका सबै कागती-खोर्सानीको झुन्ड सकिसकेको थियो । त्यो एउटा कागती-खोर्सानी भने उसले कतै पसलमा राखेन आफै हातमा बोकेर हिडिरह्यो । हिडिरह्यो । मैले उसलाई पछ्याउन छोडिन । गंगाहल, माछापोखरी, बाइपास… हुँदै ऊ नागर्जुनको जङ्गल तिर छिर्यो । अब भने मलाई डर लाग्यो ? पछ्याऊ/नपछ्याऊ ?- दोधारमा परे ! तर मलाई मेरो कथाको अन्त्य चाहिएको थियो त्यसैले पछ्याइनै रहे । बिस्तारै , रुखहरुमा छल्लिदै । कहिलेकाही ऊ टक्क अडिएर पछाडि हेर्थ्यो , त्यतिबेला म रुख गएर छल्लिथे ।
करिब ३० मिनेट पछाएपछि ऊ एउटा गुफा भए ठाउँमा पुग्यो । चारैतिर अन्धकार थियो । मुटु डरको स्टेजमा खुब मज्जाले नाचिरहेको थियो । धड्कनको आवाज रुखहरुमा ठोकिदै फेरि मेरै मुटुमा आएर टासिन्थे । ऊ गुफाभित्र पस्यो । म पनि डरको एक पोको बोकेर गुफाभित्र पसे । र एक छेउको ढुङ्गामा छलिएरै मेरो कथाको अन्त्य हेर्न थाले । उसलाई हेर्न थाले । उसले मसाल बाल्यो । उसको हातमा भएको कागती-खोर्सानी उसले एउटा बडेमानको मुर्ती सन्मुख राख्यो । मलाई थाहा भएन त्यो केको मुर्ती हो? तर त्यो मुर्ती हो भन्नेमा चै म प्रष्ट थिए ।
उसले त्यो कागती-खोर्सानी राख्ने साथै उसको शरिरिको आकार बदलिन थाल्यो । भय र आश्चर्यका किराहरुले मेरा नसाहरुमा रेस लगाउन थाले । बिस्तारै उसको कपाल लामो भयो, सेतो भयो । नङहरु लामा लामा भए । दाँतमा दाह्राहरु पनि देखिए । उसको टाउकोको दायाँ/बाँया पट्टी अरु टाउकाहरु क्रमशः निस्कन थाले …१,२,३,४,५,६,७ ? उसको पेट बढेर आयो, उसको शरीर एउटा भयनाक स्त्री आकृतिमा ढल्दै गयो । ऊ आफ्नो पेटमा मुड्की बजार्दै, चिच्याउन थाली । अब भने म डरले काँप्न थाले । के गरुँ गरुँ भयो ? म कहाँ छु जस्तो भयो ? म भयको दौड दौडन थाले । त्यहाबाट भागे । जुन दिशातिर पाइला बढे उतैतिर कुदे । हातमा भएको किताब पनि फ्यालिदिए । ‘म मेरो कथाको अन्त्य खोज्न आको, झन्डै आफ्नै अन्त्य भयो ‘ । त्यो किताबका अक्षरहरु क्रमशः लाइन लागेर मेरा दिमागमा आउन थाले , नाच्न थाले, सम्भोग गर्न थाले र जन्माइदिए प्रश्नचिह्न जस्ता रहस्यमय प्रश्नहरू- ” के त्यो मान्छे मक्ष थिई ? अनि के उसले भनेको हजार वर्ष कतै आजै त होइन ? यदि हो भने – अब के हुन्छ ? “
मेरो कविताको अर्थ